OneDrive inoda kuti isu tikanganwe nezve mapepa nekusingaperi mune yayo yazvino kugadzirisa | IPhone nhau
OneDrive inoda kuti isu tikanganwe nezve mapepa nekusingaperi mune yayo yazvino kugadzirisa
Parizvino, gore rekuchengetedza masevhisi rave chingwa chedu chezuva nezuva uye kune vazhinji vashandisi ivo chikamu chakakosha chekushanda, kungave kubva kumba, kubva kuhofisi kana chero kwatiri. Parizvino pamusika tinogona kuwana Dropbox, Google Drive, Mega, Bhokisi uye OneDrive kunyanya. Dzese dzinotipa sarudzo dzakasiyana dzekuchengetedza asi kwete zvakafanana mabasa. Kambani yega yega yakafunga kuwedzera akasiyana mabasa anoenda kupfuura kugona kubvunza gwaro rakareruka kuburikidza nharembozha kana piritsi. Uye Microsoft ndeimwe yavo neOneDrive, iyo yekuchengetedza gore sevhisi kubva kuvakomana vanobva kuRedmond.
Microsoft inoburitsa nguva nenguva, kanokwana kamwe pamwedzi, yekudzokorora kune chayo chishandiso cheIOS, inogadziridza iyo, kuwedzera mukuvandudza mashandiro uye mashandiro echishandiso, zvinoshanda kuwedzera mabasa matsva, mabasa anoita kuti OneDrive app chikumbiro chakakosha isu zvinotsamira zvakanyanya pagore. Yazvino yekuvandudza kune OneDrive app yeIOS, inoda kuti isu tikanganwe nezvebepa zvakakwana, yeizvi yakawedzera chinhu chitsva chinonzi Digitization iyo yatinogona kuongorora whiteboards, zvinyorwa uye kunyange makadhi ebhizinesi nenzira iri nyore kwazvo uye nemhedzisiro yakanaka kwazvo.
Asi pamusoro pezvo, iyi yekuvandudza zvakare inotibvumidza kuti tibvunze ipapo ipapo magwaro edu eIzwi, Excel nePowerPoint mukushandisa nevatungamiriri vekutarisa, yakanakira patinenge tichitsvaga iyo faira uye yedu yekuchengetera mazita nemazita, inosiya zvakawanda zvekuda. Zvimwe zvinhu zvitsva zvine chekuita nekushanda kuri paPadad uye mafaera ekunze, nekuti kubva zvino zvichienda zvichavhurika mune yakazara skrini, ichiwedzera saizi yayo, izvo zvinozovandudza kuvandudza kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » OneDrive inoda kuti isu tikanganwe nezve mapepa nekusingaperi mune yayo yazvino kugadzirisa
Pokémon GO kodhi inoratidza kwayasvika kusvika paApple Watch